Umuthi "Ceraxon" (isiraphu) yisidakamizwa se-nootropic. Ikhambi ngokuvamile lisetshenziselwa izingane zokwelapha. Ochwepheshe abaphumelelayo abaqaphele uma besebenzisa izidakamizwa ngokuhambisana nezinye izidakamizwa. Isidakamizwa sitholakala ngesimo sesisombululo somjovo we-intramuscular and intravenous. Isithako esisebenzayo yi-cicolin sodium.
Isidakamizwa esithi "Ceraxon" (ukungenisa kanye nokujova) siboniswa ngesifo so-ischemic esigabeni esiyinkimbinkimbi, isikhathi esiphuthumayo nesokutakula nge-craniocerebral trauma, ezinenkinga yokucabanga ngokumelene nesifo sezifo zobuchopho ezingenasisindo nezesifo esibucayi.
Isidakamizwa siyaphikisana neziguli ezine-vagotonia (i-predominance yethoni ye-parasympathetic element kwisistimu yezinzwa ze-autonomic), nge-hypersensitivity.
Ukusetshenziswa kwesidakamizwa "Ceraxon" ngesikhathi sokukhulelwa kanye nokulahlwa kwenziwa ngokuncoma kukadokotela, kucatshangelwa isilinganiso sokuzuza kanye nobungozi. Uma kunesidingo, thatha umkhiqizo phakathi nesikhathi sokudla, i-lactation inconywa ukuba ishiyiwe.
Kumiphumela emibi uma usebenzisa imithi "Ceraxon" imiyalelo yokusetshenziswa ihlanganisa ukuphazamiseka kwe-anaphylactic, ukuxosha, ukushaya, ukushaywa ikhanda, ukuthuthumela, ukukhathazeka, ukulala. Umuthi ungaphinda uvusa umkhuhlane, i-anorexia, inqwaba emilenzeni ekhubazekile. Kwezinye izimo, kwaba nomthelela omuhle esimisweni se-parasympathetic, kanye nomphumela omfushane we-hypotensive.
Isixazululo somjovo "Imiyalo ye-Ceraxon" yokusetshenziswa isincoma injection yangaphakathi (kancane imizuzu emihlanu). Ukuphathwa kokushayela kwenziwa futhi (amaconsi angamashumi amane kuya kwangu-60 ngomzuzu).
Njengoba i-CCT ne-strokes, imiyalo ye-"Ceraxon" yezidakamizwa zokusetshenziswa iphakamisa umthamo wansuku zonke ka-1-2 g. Ubude bokwelashwa buxhomeke ebukhulu besimo. Ngokwesilinganiso, ukwelashwa kuthatha izinsuku ezintathu kuya kweziyisikhombisa. Ngaphezu kwalokho, ukuguqulwa kwenzelwa ukuphathwa kwe-intramuscular noma ngomlomo. Ukuze uthole imishanguzo ye "Ceraxon", imfundo yokusebenzisa ikhuthaza ukusetshenziswa komzila owedlula umlomo noma ongenayo.
Izijovo ze-intramuscular zenziwa kanye noma kabili ngosuku.
Isiraphu "I-Ceraxon" ithathwa ngomlomo kathathu ngosuku ngezinkulungwane ezimbili kuya kwezingu-milliliters. Ukuze uthole ukulinganisa okunembile, sebenzisa isirinji yokulinganisa.
Naphezu kokuthi iziyalezo ezibhekene nezidakamizwa zibonisa ukuthi kunqunywe kusukela uneminyaka eyishumi nesishiyagalolunye, umuthi "Ceraxon" uvame ukusetshenziselwa ukwelashwa, isibonelo, nge-alalia (ukuvimbela noma ukungabikho kwenkulumo). Ezimweni ezinjalo, lesi sidakamizwa sinqunywe ngokuhambisana nezinye izidakamizwa (isibonelo, ngemithi "Pantokaltsin" no "Noofen"). Isidakamizwa "Ceraxon" sinqunywe yizifundo. Abazali abaningi baqaphela ukusebenza kwethebula. Ngakho-ke, ezinganeni, ukuxhumana kwamehlo kuyathuthuka (ukusabela kokwelashwa kwanda), umbono wezingxoxo, isilulumagama siqala ukuqoqa kancane kancane. Ngaphezu kwalokho, lesi sidakamizwa sinomphumela omuhle ekuthuthukiseni kwengqondo, njengoba inempahla evuselela ingqondo.
Noma kunjalo, kufanele kuqashelwe ukuthi ukusebenza okukhulu kunazo zonke kungafinyelelwa, ezimweni eziningi, ngokusetshenziswa kokwelapha okuyinkimbinkimbi, okubandakanya hhayi izindlela zokwelapha kuphela, kodwa nemisebenzi ehlukahlukene yokuthuthukisa.
Njengoba umkhuba ubonisa, isidakamizwa esithi "Ceraxon" sibekezelela kahle iziguli. Kodwa-ke, uma uhlangabezana nemiphumela engathandeki, kufanele uxhumane nodokotela. Ngaphambi kokusebenzisa i-Ceraxon, kufanele ufunde ngokucophelela imiyalelo yokusetshenziswa.
TV "Sleepy Hollow": nabalingisi izindima
Kulabo abanesifiso sokwazi kanjani ukulungisa Tricolor